Ọdọ ọdụm: njirimara, ịdị iche iche na ịdị mkpa | Network Meteorology
Otu n’ime nnukwu mmiri nwere ọtụtụ ihe dị iche iche dị n’osimiri Mediterenian bụ mmiri nke ọdụm. Ọ bụ oke uzo nke oke osimiri a nke chere ihu aja aja aja nke mpaghara ndịda France nke Occitania na Provence-Alpes-Côte d'Azur. A na-amata mmiri a ọ bụghị naanị maka ọdịdị ala ya, mana n'ihi na ọ bụ ebe obibi maka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ụdị niile dị na Osimiri Mediterenian.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma banyere Gulf of León, njirimara ya na ụdị ndụ dị iche iche ọ nwere.
2 Ihe ndi di iche iche nke Gulf of León
3 Ebe obibi nke mmiri di iche iche nke Osimiri Leon
4 Ichekwa umu
A na-ekewa Ọwara Osimiri Leon site na ọwụwa anyanwụ site na ndagwurugwu nke njikọ nke Osimiri Rhone na Oké Osimiri Mediterenian dị n'etiti ọwụwa anyanwụ na Côte d'Azur. Kè ya na ndịda ọdịda anyanwụ bụ ebe Pyrenees zutere Oké Osimiri Mediterenian, France na Spain, kewapụrụ na Costa Brava na Catalonia.
E kpughere kọntinent ebe a dị ka nnukwu ala gbara osimiri okirikiri, na ala gbara osimiri okirikiri na-agbada ngwa ngwa na ndagwurugwu miri emi nke Mediterenian. Ejiri oke mmiri nke ọdọ mmiri na ọtụtụ ọdọ mmiri mara ụsọ mmiri dị n'ụsọ osimiri ahụ. Parfọdụ ngwugwu, ọkachasị limestone, bụ ndị mbadamba mbara igwe a jikọtara ha.
Isi ọdụ ụgbọ mmiri nke mmiri bụ Marseille, na-esote Toulon. Azụ azụ na mpaghara Ọwara jupụtara na nzuzo, ọkachasị na-ada ala, mana ọ na-ebelata ugbu a n'ihi oke azụ. Nke a bụ mpaghara ama ama ama, na ikuku ifufe, a na-akpọ ifufe northwest ma ọ bụ ifufe mistral. Isi osimiri ndị na-asọba n'osimiri bụ Tech (84,3 km), Têt (120 km), Aude (224 km), Orb (145 km), Hérault (160 km), Vidourle (85 km) na Rhone (812 km) ).
Bay nke León abụghị mpaghara mpaghara dị mfe, mana nsonaazụ nke otu Oligocene-Miocene Corsican-Sardinia nke na-agbanwegharị na-agagharị agagharị megide Europa Craton. Nke a buru ibu ọ gbanyeghachi usoro ihe owuwu dị mgbagwoju anya ketara site na mmalite nke Tethys na Pyrenean orogeny. Egwuregwu nke ebumnuche nke Eocene mere ka Pyrenees dị ka mpikota onu ma mee ka ahịhịa ahụ dum dịrị. Ndị ọkà mmụta ihe banyere ala na-ebu amụma na a ga-enwe ubi mmanụ ole na ole dị n'akụkụ mmiri n'ọnụ ọnụ mmiri ahụ.
Ihe ndi di iche iche nke Gulf of León
O bu ihe ama ama maka onodu anumanu di iche-iche, ya na onodu di iche-iche nke ndu juputara na otutu plankton dika nri nke otutu azu na ndi anumanu. Nkwupụta LIC na-ekwe nkwa nchebe ya na ntinye ya na-enye ọnọdụ na-enweghị atụ iji kọwaa mmalite nke ebe obibi na ụdị dị iche iches.
Ọrụ LIFE + INDEMARES nke Biodiversity Foundation nke Ministry of Agriculture, Food and Environment - nke rụpụtara nsonaazụ ya na Eprel nke afọ gara aga - gosipụtara na ndagwurugwu mmiri nke Bay nke León nwere Oke Osimiri Mediterenian.
Ọwa mmiri nke dị n'okpuru mmiri bụ mpaghara mmiri nke gunyere Cap de Creus continental shelf na olulu Cap de Creus na Lacaze-Duthiers dị n'elu shelf French. Osimiri mmiri nwere ihe karịrị kilomita 987 na njirimara gburugburu ebe obibi pụrụ iche. A na-echebe ya site na ntinye ya dị ka saịtị nke Mkpa Obodo (SCI). Nlekọta ya na-enye usoro enweghị atụ maka kọwaa mmalite nke ebe obibi na ụdị dị iche iche, yana nchebe. Activitiesfọdụ ọrụ akụ na ụba mpaghara n'ihi na ọ bụ otu n'ime mpaghara kachasị arụ ọrụ na Mediterenian.
Usoro okpuru mmiri okpuru mmiri dị na nsọtụ ebe ọwụwa anyanwụ nke mpaghara Iberia dum na nwere ihe dị ka ụdị 2.200, nke na-anọchite otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ụdị ndị e dekọrọ na Mediterenian.
Oghere ahụ na-enye ọtụtụ ụdị okike dị iche iche na mpaghara pere mpe: usoro okike ndị dị n'ụsọ oké osimiri, ihe ndozi na usoro mkpọda, na obodo ndị dị n'okpuru mmiri, ya mere o nwere ogo dị iche iche nke ihe dị iche iche dị ndụ. Nnukwu akụ na ụba nke ebe a bụ obere n'ihi ụba nke plankton, yana ọkwa nke azụ dị oke ọnụ ahịa dị ka cod na krill, nke bụkwa isi iyi nke ọtụtụ azụ na anụ ụlọ.
Ebe obibi nke mmiri di iche iche nke Osimiri Leon
A hụrụ Madrepora oculata na Lophelia pertusa, otu n’ime mmiri coral kachasị mma e chebere na Mediterenian, n’okpuru ọwa mmiri nke Cap de Creus. N'ihi na nrụgide nke ọrụ mmadụ, ụdị a efuola ebe ọzọ.
A na-ahụkarị dolphin ndị dọkara adọka na azụ whale na-adịghị mma na mpaghara a, ebe a na-ahụkwa dolphins na-acha uhie uhie na-ahụkarị n'ebe obibi n'ụsọ oké osimiri. Ọkpa ahụ bụkwa ebe dị mkpa maka ọnụ ọgụgụ nnụnụ dị mkpa. N'ime ha, mmiri ọdọ mmiri dị na Mediterenian pụtara, nke nwere ike ịhụ n'otu ụbọchị ruo ihe nlele 1.200, yana egwu mmiri Balearic dị egwu. N’oge oyi, terns ndị nwere ụkwụ nwere ọ terụ jupụtara na mmiri ndagwurugwu ahụ, tinyekwara nnukwu olulu Audouin na okpu mmiri Atlantic.
Ebe obibi a na gburugburu mmiri dị iche iche bụkwa ebe obibi nye ọtụtụ ụdị anụmanụ ndị ọzọ nwere ụdị ndụ dịgasị iche iche, dịka nzacha feeders, suspensivores, detritivores, scavengers na dinta. Ha niile na-erite uru site na mmiri dị elu nke Ọwara Oké Osimiri León.
Njirimara a bara ụba na-azaghachi ọtụtụ ihe, ihe ndị a na-apụta otu ihe n'otu oge n'akụkụ mmiri nke usoro ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke Ọdụm ọdụm, nnukwu uru obibi ya na-eme ka ọ bụrụ ihe nketa sitere na Europe.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ichekwa ụdị dị iche iche nke okike ndị a, ọ dị mkpa iwebata iwu na-achịkwa ọnụọgụ nke ọrụ a ga-arụ. Otu n'ime ụzọ isi gbasaa ihe ọmụma banyere ndị mmadụ bụ site na agụmakwụkwọ gburugburu ebe obibi. Ekele anyị nwere ike ịnye ndị mmadụ ụkpụrụ nke nchekwa na mkpa usoro okike ndia maka ichebe ha ogologo oge. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ bụ inwe ike ichekwa usoro okike na ịnọgide na-ewepụta ihe ndị na-enweghị mkpa imebi ebe obibi sitere n'okike nke ụdị niile a kpọtụrụ aha n'elu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, Osimiri Ọdụm bara ọgaranya na ọtụtụ ihe dịgasị iche iche na nchedo ya dị mkpa. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Gulf of Lion na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ọwara ọdụm
Saturn yiri mgbaaka
Ọdachi ndị na-emere onwe ha